Shiinaha KN95 GB2626-2006, GB2626-2019 (Madaxa-Fuulay) warshad iyo soosaarayaasha | Gubang
Maaskaradaas waxaa loogu talagalay in loogu isticmaalo ka hortagga aerosols-ka aan saliidda lahayn; xaddidaadda isticmaalka waqtiga ayaa laga yaabaa inay dhaqan gasho. Aad bay u adkaysi badan yihiin waxayna leeyihiin dusha sare oo jilicsan oo raaxo leh sanka la hagaajin karo iyo madaxa lagu xiro si ay ugu habboon yihiin. Waxaa jira iska caabbinta neefsashada oo hooseysa ee raaxada shaqada ee kordhay
Si loogu isticmaalo kahortaga walxaha aerosolka ee saliida ka caagan
Neefsashada Resistance Delta P (85LPM + 1LPM): <20mmH2O
Cadaadiska Neefsashada Delta P (85LPM + 1LPM): <25mmH2O
Waxtarka sifeynta: >95% loogu talagalay walxaha laf-dhabarta ee 0.3micron
Awoodda Jiidashada Madaxa: 20N / 10s
Tijaabada Baadhitaanka Qiiqa Balaasta: < 30ml / min
Qiiqa Baaburka Xoog Weld: 10N / 10s
Maaskarada Wejiga la Tuuri karo KN95
KN95 anti virus Earloop maaskaro wejiga la tuuri karo oo aan tolmo lahayn
Shiinaha Alaab-qeybiye Soosaar Jumlo Dheer ah Earloop La Tuuri Karo Oo Aan Xidhnayn 5 Waji Waji
Marka lagu daro wasakheynta hawada, qiiqa sigaarka wuxuu waxyeelo u geysan doonaa caafimaadka neefsashada, dadkuna wey is urursanayaan, Faafitaanka dhibcaha bukaanku waxay sidoo kale khatar caafimaad nagu keeni karaan, iyadoo diiradda la saarayo caafimaadka neefsashada.
Astaamaha loogu talagalay Anti Virus Face Mask:
-Isku-shaandhayn 5-Waji-waji ah
-Function: Ka hortagga manka, Xasaasiyad la'aan, boodhka caddayn
-Ergonomic design, ilaalinta wajiga oo badan
-Beelo lagu neefsan karo oo cabbir leh, neefsasho raaxo leh
-Adopt shaandheyn tayo sare leh, oo aan si fiican u boor lahayn
Maaskarada wajigaaga KN95 ma yahay mid sax ah? 3 Ways Oo Aad Ku Imtixaan Karto
Maaskarada wajiga ee '95 'ee tayada tayada leh ee la aqoonsan yahay ayaa ka ilaaliya geesiyaasheena daryeelka caafimaadka iyo shaqaalaha kale ee safka hore inay qandaraas ka qaataan COVID-19. Iyadoo kororka baahsan ee baahida, soo saareyaasha Shiinaha ay hada soo saarayaan 200 milyan oo wajiga wajiga ah maalin kasta, laakiin Delta inta udhaxeysa saadka iyo dalabka ayaa sii kordheysa. Natiijo ahaan, nuqullo been abuur ah ayaa ku qulqulaya suuqa, inta badan waxaa lagu iibiyaa qiimo aad u sarreeya. Maaskarada loo yaqaan 'KN95 Face mask 5 Pack Ships' ee laga soo diray USA In StockPollen - Maaskarada 'KN95' ayaa kaa difaaci karta manka. Miirahayagu wuxuu leeyahay waxqabad ka sarreeya 95% at 0.3 pm walxaha cabbirka, halka walxaha manka caadiga ah ay qiyaastii yihiin 10 - 1000 pm. Xasaasiyadda Xayawaanka - Maaskarada wajiga ee loo yaqaan 'KN95' ayaa kaa difaaci karta xasaasiyadda xoolaha. Waxtarka ka sarreeya 95% at 0.3 pm cabbirka walxaha, walxaha xasaasiyadda ku leh xayawaanka waxay qiyaastii yihiin 5 KN95 Waji Maashooyinka Maska hore ee Wejiga MaaskaroKN95 Wejiga Waji (4 Lakab). Waxyaabaha Ka-hortagga (Qalliinka Aan ahayn). Dhar aan tolmo lahayn + suufka Polypropylene. Maaskarada difaaca jirka ee loo yaqaan 'KN95', 95% si wax ku ool ah u sifeeya boodhka, bakteeriyada iyo walxaha kale ee waxyeellada leh, ayaa ah maaskaro aad u fiican oo looga hortago infekshinka fayraska iyo dureyga.
Hore: 3 Maaskarada difaaca ee la tuuro
Xiga: KN95 GB2626-2006, GB2626-2019 (Iyada oo Qalabka Neefsashada)
Neefsadaha Shiinaha Ce Kn95
Shiinaha Ce Kn95 Jawaab celiyeyaal
Jawaabayaasha Shiinaha Ce Kn Kn
Shiinaha Kn95 Jawaabayaasha
Neefsadaha Shiinaha Kn95
Jawaabayaasha Shiinaha Kn95
KN95 GB2626-2006, GB2626-2019 (Qiiqa V ...